State Counsellor receives Mr. Yohei Sasakawa, Special Envoy of the Government of Japan – MINISTRY of FOREIGN AFFAIR
State Counsellor receives Mr. Yohei Sasakawa, Special Envoy of the Government of Japan
Daw Aung San Suu Kyi, State Counsellor of the Republic of the Union of Myanmar, received Mr. Yohei Sasakawa, Special Envoy of the Government of Japan for National Reconciliation in Myanmar and Chairman of the Nippon Foundation, at4pm on 25 March 2019 at the Ministry of Foreign Affairs, Nay Pyi Taw.
During the meeting, they cordially exchanged views on the matters pertaining to Japan’s continued provision of constructive assistance for Rakhine State and peace and national reconciliation process of Myanmar.
During the visit, Mr. Yohei Sasakawa paidavisit to Sittwe and Maungtaw from 22nd to 24th
March 2019 to provide necessary assistance to the Myanmar Government’s efforts for the repatriation process.
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က ဂျပန်အစိုးရ၏ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်း ဥက္ကဋ္ဌအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
(၂၅-၃-၂၀၁၉ ရက်၊ နေပြည်တော်)
ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဂျပန်အစိုးရ၏ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး ဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နိပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာ ရိုဟေး ဆာဆာကာဝါအား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၅ ရက်၊ ၁၆၀ဝ နာရီအချိန်တွင် နေပြည်တော်ရှိ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ ပါသည်။
ထိုသို့ တွေ့ဆုံရာတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးကိစ္စတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ဂျပန်နိုင်ငံမှ အပြုသဘော ဆက်လက်ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည့် ကိစ္စရပ်များအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေး အမြင်ချင်းဖလှယ်ခဲ့ကြပါသည်။
မစ္စတာ ရိုဟေး ဆာဆာကာဝါသည် မြန်မာနိုင်ငံ ခရီးစဉ်အတွင်း ဂျပန်အစိုးရအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ နေရပ်စွန့်ခွာ သွားသူများအား ပြန်လည်လက်ခံရေးအတွက် မြန်မာအစိုးရမှ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် လိုအပ်သောအကူအညီများ ပေးအပ်သွားနိုင်ရန် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၂၂ ရက်မှ ၂၄ ရက်အထိ စစ်တွေမြို့နှင့် မောင်တောမြို့များသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှု လေ့လာခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။